“Xildhibaannada Qaar Baa Nagu Yidhaahda ‘Qasabadan Noo Socota Iska Xidhi-Meyno’ Oo Waxay Ogyihiin Inaan….” | Haatuf Media Network
“Xildhibaannada Qaar Baa Nagu Yidhaahda ‘Qasabadan Noo Socota Iska Xidhi-Meyno’ Oo Waxay Ogyihiin Inaan….”
“Somaliland Waxay U Dabran Tahay 400 Oo Qof Ee Waa Loo Kordhiyee, buy Doorasho Ma Dhacaysaa?”-Jamaal Cali Xuseen
Hargeysa, advice August 20, unhealthy 2015 (Haatuf)- Musharraxa Mansabka Madaxweynaha ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen ayaa ka hadlay caqabad hor taalla ka midho dhalinta geedi socodka dimuqraadiyada Somaliland oo uu sheegay in ay shakhsiyaad dhowr boqol ka koobani xujo ku noqdeen hana qaadkeeda.
Jamaal Cali Xuseen ayaa waxa uu sidaasi ku sheegay qoraal uu xalay cawayskii soo dhigay barta uu ku leeyahay degelka Facebook-ga kaga hadlay dabarro siyaasadeed oo ku seetaysan nidaamka dawladnimo ee Somaliland ayaa waxa uu qoraalkiisa ku bilaabay sidan:
“Dalka Somaliland wuxuu u usereccentric.com dabran yahay koox aan ka badneyn 400 oo qof oo isugu jira Siyaasiyiin ka kala tirsan Xukuumadda, Guurtidda, Wakiiladda, Dawladaha Hoose iyo Xisbiyadda Qaranka. Waxa soo raaca tiro yar oo iyagu aan intaa midna ahayn oo qalad iyo saxba ku taageeraya waxa dalka ay ka sameynayaan kooxdaasi. Dhamaantood shakhsiyaadkaasi waxay eeganayaan dano gaar u ah iyaga. Kooxdan Siyaasiyiinta ahi sharciyaddii dalka ayeey qoorta iskaga duubtay. Shacabkii waa la ocoa.ca kala qoob-qoobay oo reero ayaa loo kala takooray. Waxa jira laba Gole Baarlamaan (Guurti iyo Wakiillo) iyo Madaxtooyo doonaya inay kuligood kursigga ku fadhiyaan ilaa intii u suurtogal ah. Kordhisku wuxuu dan u yahay nimankaasi mushaharka iyo mashaariicdda jaqaya ee kuligood doonidda wada saaran. Ilaahay iyo Ummaduba way ka war hayaan in ay jiraan dad wanaagsan oo ka tirsan siyaasiyiintaa aan idiin soo sheegay oo odhan mayno siyaasiyiinta oo dhami way wada xun yihiin. laakiin badankoodu waa kooxo isku shaqaysta oo uu u afduuban yahay dalku.
Xildhibaanaddu way ogyihiin in aanay dan u ahayn in doorashaddu qabsoonto, oo qaarbaaba toos noogu yidhaahda; ” iska xidhi mayno qasabaddan noo socota”. Inkastoo ay xisbiyadda qudhoodu wax badan ka qaldan yihiin, haddana tanaasul weyn iyo bisayl siyaasadeed bay muujiyeen oo aan http://cricketcatering.com/cost-of-cialis la mid ahayn tii uu Kulmiye sameyn jiray berigii uu mucaaridka ahaa. Shacabka ayaa ah awoodda ugu sareysa ee dalka, mana filaayo in ay mar danbe aqbali doonaan in ay doorashaddu dib uga dhacdo xilligaa imika loo qoondeeyey ee qaranku duuduubka ku liqeen. Adduunka kale sicirka roodhidda oo la kordhiyo ayaa ay shicibku dareenkoodda muujiyaan oo keenta kacdoon dadweyne, laakiin Somaliland boqol qalad, boqol boob, iyo jaah wareer weyn ayaa ka dhacay 5 tii sano ee ay Kulmiye taladda dalka hayeen. Xataa waatii uu madaxweynahu u balan qaaday ummadda dhowr jeer in aanay doorashadu maalin dib uga dhici doonin. Laakiin balan qaadkii madaxweynahu waakii beenoobay. Dal wuxuu dal noqdaa marka qof kastoo muwaadin ahi uu ka dhiidhiyo xumaanta, wanaagana taageero. Waana lama huraan in farta lagu fiiqo masuulka mar hore been sheegay, oo balan danbe aan laga dhegaysan. Haldoorka dalkuna yaanu indhaha ka qarsan geedi socodka Somaliland iyo hiigsiga ummadda. Siyaasiyiintuna danta shacbka ha ka horeysiiyaan tooda gaarka ah ileyn Ilaahay baa qadaray cidda kursiga fuuli doonta oo samadda ayeey ka qoran tahaye. Allow Sahal Umuuraha”.
Qalinkii Jamaal Cali Xuseen